အဆီပြန်တဲ့အသားအရေ (Oily skin) အတွက် skincare tips and tricks ပေါင်းချုပ် – For her myanmar
Posted on February 20, 2019 Author Hnin Ei Oo	Comment(0)
အဆီပြန်သူတွေ မဖြစ်မနေကို ဖတ်ကြည့်သင့်နေပါပြီနော် 🤔🤔🤔
အဆီပြန်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကတော့ ဒီလိုပူပြင်းပြီး ဖုန်ထူထပ်၊ ဆီကြော်အစားအသောက်တွေ သိပ်များလွန်းတဲ့ မီယန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အင်မတန်မှရင်းနှီးပြီးသားစကားလုံး ဖြစ်နေမှာပါ။ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့် အသားအရေစပြီးပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာ ဒီကလူတွေ တော်တော်များများ အဆီပြန်တဲ့အသားအရေ ပိုင်ရှင်တွေ ဖြစ်သွားကြတာပဲ။ နောက်ပြီး အဆီပြန်တော့ ဝက်ခြံလေးတွေ ဟိုတစ်ဖု၊ ဒီတစ်စထွက်လာရင်း မေ့မျက်နှာ လဝင်ကြီးလို ဝင်းပပဖြစ်သွားတာပေါ့အေ။ အဲ့တော့ တစ်နေရာတည်း တစ်စုတစ်စည်းတည်းကနေ Skincare ပေါင်းချုပ်ကို ထုတ်ချပေးလိုက်တော့မယ်။
၁။ အရင်ဦးဆုံး မျက်နှာသစ်တဲ့အပိုင်းကို သွားလိုက်ရအောင်နော်။ အဆီပြန်တဲ့လူတော်တော်များများက ချွေးပေါက်ကျယ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲ့တော့ မျက်နှာသစ်တဲ့အခါမှာ ဟိုးချွေးပေါက်အတွင်းပိုင်းအထိ သန့်စင်သွားဖို့က အင်မတန်မှအရေးကြီးပြီး အဆီပြန်တဲ့လူတွေအတွက် သီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာကို ရွေးသုံးဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်နော်။ နောက်ပြီးရင် ရေဓာတ်ပြန်ဖြည့်ပေးတဲ့ Moisturizing မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာနဲ့ ပြန်သစ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဆီပြန်တဲ့လူတွေအတွက် ထုတ်ထားတဲ့ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာက မလိုအပ်တဲ့အဆီတွေအပြင် လိုအပ်တဲ့ရေဓာတ်ကိုပါ စုပ်ယူသွားတာမို့ အသားခြောက်စေတယ်လေ။
၂။ ပြီးတာနဲ့ တိုနာအဆင့်ရောက်ပြီ။ တိုနာကို ဂွမ်းစနဲ့ လိုက်လိမ်းနေမယ့်အစား လက်ထဲထည့် မျက်နှာပေါ်ပုတ်ပုတ်ပြီး သိပ်ချလိုက်ပါ။ မျက်နှာသစ်တဲ့အချိန် ကျယ်သွားမယ့်ချွေးပေါက်ကို ပြန်ကျဉ်းပေးပါလိမ့်မယ်။
၃။ ရေဓာတ်ဖြည့်ခရင်မ်လိမ်းဖို့ လုံးဝမကြောက်ပါနဲ့။ မျက်နှာမှာအဆီပြန်တယ်ဆိုတာ ရေဓာတ်စွတ်ပြည့်နေလို့မဟုတ်ဘဲ ချွေးပေါက်ကျယ်နေလို့ဆိုတာ ချိမတို့သိအောင် ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲမသိဘူး။ ဆိုတော့ကား မျက်နှာမှာအဆီနဲ့ ရေဓာတ်မျှတဖို့အတွက် ရေဓာတ်ဖြည့်ခရင်မ်လိမ်းဖို့ လုံးဝမကြောက်ပါနဲ့နော်။
၄။ နေလောင်ဒဏ်ကာကွယ်တဲ့ခရင်မ်ကို မဖြစ်မနေလိမ်းပါ။ နေရောင်ထဲမှာပါတဲ့ UVA, UVB ရောင်ခြည်တွေက မျက်နှာအဆီပြန်ခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းထဲမှာ ဒါကလည်းပါနေလို့လေ။
၅။ Skincare ဝယ်တဲ့အခါ အဆီထိန်းချင်ဇောနဲ့ Alcohol ပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကို အရမ်းမဝယ်ပါနဲ့။ ခဏတာအတွက်တော့ အဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့ ရေရှည်မှာတော့ ဒီပစ္စည်းတွေက ကိုယ့်ချွေးပေါက်ကို ပိတ်ဆို့ပြီး အသားအရေပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
၆။ Vitamin C ပါဝင်တဲ့ အသားဖြူစကွင်းကဲတွေကို ယောင်လို့တောင်မသုံးပါနဲ့နော်။ လုံးဝလုံးဝ မတည့်ပါဘူး။ ရှိနေတဲ့ အဖုတွေ ပိုယောင်ကိုင်းပြီး စုတ်ပြတ်ချင်ရင်တော့ ယူ့သဘောပဲ။
၇။ ခရင်မ်အမျိုးအစားတွေ ဝယ်တဲ့အခါမှာ ရိုးရိုးခရင်မ်ထက် Light cream လို့ခေါ်တဲ့ ဂျယ်လ်ဘက်သွားတဲ့ ခရင်မျိုး ရွေးဝယ်ပါ။ အဲဒီအမျိုးအစားတွေက စိမ့်ဝင်အားကောင်းတာမို့ အဆီပြန်တဲ့လူတွေနဲ့ ပိုပြီးသင့်တော်တယ်လေ။
၈။ မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးတွေ ဝယ်တဲ့အခါ ဖြစ်နိုင်ရင် ရေဓာတ်အောက်ခံ (Water based) အမျိုးအစားကို ဝယ်ပေးပါ။ ပြီးရင် ချွေးပေါက်ဟိုးအတွင်းပိုင်းအထိ သန့်စင်ပေးတဲ့ Deep pore double cleansing ကိုအမြဲလုပ်ပေးပါနော်။
Related Article >>> BB,CC and DD cream တွေက တကယ် မိတ်ကပ်သားပါးတာလား?
၉။ နောက်ဆုံးမျက်နှာသစ်တဲ့အခါမှာ ရေနွေးနဲ့တစ်ခေါက်သစ်ပြီးတာနဲ့ ရေအေးပြန်ပြီးဆေးချပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရေနွေးက မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ ချွေးပေါက်တွေကို ကျယ်စေပြီး ရေအေးက အဲဒီချွေးပေါက်တွေကို ပြန်ကျဉ်းစေလို့လေ။
ဒီဆောင်းပါးလေးက ယောင်းလေးတို့ကို အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။ မေ့မျက်နှာအဆီတပြန်ပြန် ဝင်းပပရန်ကနေ ကင်းဝေးပြီး စိုပြည်ကြည်လင်တဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။
အဆီပွနျသူတှေ မဖွဈမနကေို ဖတျကွညျ့သငျ့နပေါပွီနျော
အဆီပွနျတယျဆိုတဲ့ စကားလုံးကတော့ ဒီလိုပူပွငျးပွီး ဖုနျထူထပျ၊ ဆီကွျောအစားအသောကျတှေ သိပျမြားလှနျးတဲ့ မီယနျမာနိုငျငံမှာတော့ အငျမတနျမှရငျးနှီးပွီးသားစကားလုံး ဖွဈနမှောပါ။ ဟျောမုနျးအပွောငျးအလဲကွောငျ့ အသားအရစေပွီးပွောငျးလဲတဲ့အခြိနျမှာ ဒီကလူတှေ တျောတျောမြားမြား အဆီပွနျတဲ့အသားအရေ ပိုငျရှငျတှေ ဖွဈသှားကွတာပဲ။ နောကျပွီး အဆီပွနျတော့ ဝကျခွံလေးတှေ ဟိုတဈဖု၊ ဒီတဈစထှကျလာရငျး မမေ့ကျြနှာ လဝငျကွီးလို ဝငျးပပဖွဈသှားတာပေါ့အေ။ အဲ့တော့ တဈနရောတညျး တဈစုတဈစညျးတညျးကနေ Skincare ပေါငျးခြုပျကို ထုတျခပြေးလိုကျတော့မယျ။
၁။ အရငျဦးဆုံး မကျြနှာသဈတဲ့အပိုငျးကို သှားလိုကျရအောငျနျော။ အဆီပွနျတဲ့လူတျောတျောမြားမြားက ခြှေးပေါကျကယျြတတျကွပါတယျ။ အဲ့တော့ မကျြနှာသဈတဲ့အခါမှာ ဟိုးခြှေးပေါကျအတှငျးပိုငျးအထိ သနျ့စငျသှားဖို့က အငျမတနျမှအရေးကွီးပွီး အဆီပွနျတဲ့လူတှအေတှကျ သီးသနျ့ထုတျထားတဲ့ မကျြနှာသဈဆပျပွာကို ရှေးသုံးဖို့ အရမျးအရေးကွီးပါတယျနျော။ နောကျပွီးရငျ ရဓောတျပွနျဖွညျ့ပေးတဲ့ Moisturizing မကျြနှာသဈဆပျပွာနဲ့ ပွနျသဈဖို့မမပေ့ါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဆီပွနျတဲ့လူတှအေတှကျ ထုတျထားတဲ့ မကျြနှာသဈဆပျပွာက မလိုအပျတဲ့အဆီတှအေပွငျ လိုအပျတဲ့ရဓောတျကိုပါ စုပျယူသှားတာမို့ အသားခွောကျစတေယျလေ။
Related Article >>> မိတျကပျမလိမျးခငျ လုပျသငျ့တဲ့ skincare အဆငျ့(၆)ဆငျ့
၂။ ပွီးတာနဲ့ တိုနာအဆငျ့ရောကျပွီ။ တိုနာကို ဂှမျးစနဲ့ လိုကျလိမျးနမေယျ့အစား လကျထဲထညျ့ မကျြနှာပျေါပုတျပုတျပွီး သိပျခလြိုကျပါ။ မကျြနှာသဈတဲ့အခြိနျ ကယျြသှားမယျ့ခြှေးပေါကျကို ပွနျကဉျြးပေးပါလိမျ့မယျ။
၃။ ရဓောတျဖွညျ့ခရငျမျလိမျးဖို့ လုံးဝမကွောကျပါနဲ့။ မကျြနှာမှာအဆီပွနျတယျဆိုတာ ရဓောတျစှတျပွညျ့နလေို့မဟုတျဘဲ ခြှေးပေါကျကယျြနလေို့ဆိုတာ ခြိမတို့သိအောငျ ဘယျလိုရှငျးပွရမလဲမသိဘူး။ ဆိုတော့ကား မကျြနှာမှာအဆီနဲ့ ရဓောတျမြှတဖို့အတှကျ ရဓောတျဖွညျ့ခရငျမျလိမျးဖို့ လုံးဝမကွောကျပါနဲ့နျော။
၄။ နလေောငျဒဏျကာကှယျတဲ့ခရငျမျကို မဖွဈမနလေိမျးပါ။ နရေောငျထဲမှာပါတဲ့ UVA, UVB ရောငျခွညျတှကေ မကျြနှာအဆီပွနျခွငျးရဲ့ အဓိကအကွောငျးအရငျးထဲမှာ ဒါကလညျးပါနလေို့လေ။
၅။ Skincare ဝယျတဲ့အခါ အဆီထိနျးခငျြဇောနဲ့ Alcohol ပါတဲ့ပစ်စညျးတှကေို အရမျးမဝယျပါနဲ့။ ခဏတာအတှကျတော့ အဆငျပွနေိုငျပမေဲ့ ရရှေညျမှာတော့ ဒီပစ်စညျးတှကေ ကိုယျ့ခြှေးပေါကျကို ပိတျဆို့ပွီး အသားအရပွေဿနာတှကေို ဖွဈစပေါလိမျ့မယျ။
၆။ Vitamin C ပါဝငျတဲ့ အသားဖွူစကှငျးကဲတှကေို ယောငျလို့တောငျမသုံးပါနဲ့နျော။ လုံးဝလုံးဝ မတညျ့ပါဘူး။ ရှိနတေဲ့ အဖုတှေ ပိုယောငျကိုငျးပွီး စုတျပွတျခငျြရငျတော့ ယူ့သဘောပဲ။
၇။ ခရငျမျအမြိုးအစားတှေ ဝယျတဲ့အခါမှာ ရိုးရိုးခရငျမျထကျ Light cream လို့ချေါတဲ့ ဂယျြလျဘကျသှားတဲ့ ခရငျမြိုး ရှေးဝယျပါ။ အဲဒီအမြိုးအစားတှကေ စိမျ့ဝငျအားကောငျးတာမို့ အဆီပွနျတဲ့လူတှနေဲ့ ပိုပွီးသငျ့တျောတယျလေ။
၈။ မိတျကပျဖကျြဆေးတှေ ဝယျတဲ့အခါ ဖွဈနိုငျရငျ ရဓောတျအောကျခံ (Water based) အမြိုးအစားကို ဝယျပေးပါ။ ပွီးရငျ ခြှေးပေါကျဟိုးအတှငျးပိုငျးအထိ သနျ့စငျပေးတဲ့ Deep pore double cleansing ကိုအမွဲလုပျပေးပါနျော။
Related Article >>> BB,CC and DD cream တှကေ တကယျ မိတျကပျသားပါးတာလား?
၉။ နောကျဆုံးမကျြနှာသဈတဲ့အခါမှာ ရနှေေးနဲ့တဈခေါကျသဈပွီးတာနဲ့ ရအေေးပွနျပွီးဆေးခပြါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရနှေေးက မကျြနှာပျေါမှာရှိတဲ့ ခြှေးပေါကျတှကေို ကယျြစပွေီး ရအေေးက အဲဒီခြှေးပေါကျတှကေို ပွနျကဉျြးစလေို့လေ။
ဒီဆောငျးပါးလေးက ယောငျးလေးတို့ကို အမြားကွီးအထောကျအကူဖွဈစလေိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျနျော။ မမေ့ကျြနှာအဆီတပွနျပွနျ ဝငျးပပရနျကနေ ကငျးဝေးပွီး စိုပွညျကွညျလငျတဲ့ အသားအရကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစရှေငျ။
Tagged and, oily, skin, skincare, tips, tricks
၂၀၁၉ မှာတစ်ပတ်ပြန်လည်ပြန်လာမယ့် ၉၀ ခုနှစ်က မိတ်ကပ် trend (၆) မျိုး
Posted on January 24, 2019 Author Hnin Ei Oo
၉၀ ဆိုပြီးအထင်တော့ဖြင့် မသေးစေချင် >.<
ရှေ့ဆံပင်လေးတွေ အမြဲတမ်းလန်းနေအောင် ပုံသွင်းနည်း(၃)နည်း
Posted on May 26, 2017 Author
ဖြောင့်စက်လည်းမလို လွယ်လည်းလွယ် အချိန်တိုတွင်း ရမယ့်နည်းလေးတွေနော်။